चांगन अटोले नेपालमा दियो भविष्यमा भित्रिने आफ्नो गाडीहरुको एक झलक « Khabarhub
चांगन अटोले नेपालमा दियो भविष्यमा भित्रिने आफ्नो गाडीहरुको एक झलक
काठमाडौँ– धेरै प्रतिक्षा पछि, चीनको नंबर १ प्यासेन्जर ब्रान्ड, चांगन अटो , अन्ततः नेपाली बजारमा आफ्नो विभिन्न प्रिमियम गाडीहरु प्रस्तुत गर्दैछ। सबै अटोमोबाइल उत्साहीहरुका लागी प्रतीक्षा लगभग समाप्त हुन गइरहेको छ। कम्पनीले २ वर्षभित्र ५ वटा उत्कृष्ट गाडीहरु सार्वजनिक गर्दैछ ।
चांगन अटोले आफ्नो प्रीमियम सेडान, “एल्सभीन” को आगमन संगै आफ्नो यात्रा नेपालमा सुरु गर्नेछ। यस गाडीमा प्रयोगकर्ताहरुले लक्जरी, आराम, र कार्यक्षमताको मिश्रणको अनुभव गर्नुहुनेछ। १.४ लि. ब्लू कोर इन्जिन द्वारा संचालित, एल्स्भिन ७-इन्च फ्लोटिंग इन्फोटेनमेन्ट टच स्क्रीन प्रणालीसंग आउँछ।
एल्सभीनपछि, एक प्रीमियम लाइफस्टाइल पिक अप , “हंटर”, नेपाली सडकमा अनुग्रह हुन गइरहेको छ। हन्टरमा उच्च शक्ति र प्रदर्शनको साथसाथै बाहिरी र भित्री आकर्षक डिजाइनहरू पाउन सकिन्छ। हन्टरमा २३० एम.एमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुनेछ जसले गर्दा यसलाई पूर्ण अफ-रोडर बनाउँछ। एल्स्भिन र हन्टर २०२१ मा नेपाली सडकमा आउनेछन् ।
२०२२ वर्षको सुरुवात लक्जरी ऐसयुवि , “ओशान एक्स ७” को लन्चसंग हुनेछ। ओशान एक्स ७ सुविधाहरू र विलासिताको मिश्रण हुनेछ। यसपछि मध्यम आकारको स्टाइलिश एस.यू.भी, “सीऐस ३५ प्लस ” लन्च गरिनेछ। सीएस ३५ प्लसले गुणस्तर डिजाइन संगै आरामदायक ड्राइभिंग अनुभव पनि प्रदान गर्दछ।
२०२२, एक उच्च एस्. यु. भी “युनि-टि” को आगमन संग समाप्त हुनेछ । यस गाडीमा प्रयोगकर्ताहरूलाई भविष्यको डिजाइनका साथ, अद्भुत अनुभूति दिनका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू छन्। युनि-टि उत्कृष्ट ड्राइभिङ सहायता प्रदान गर्ने लेभल ३ स्वायत्त ड्राइभिङ सुविधासँग आउनेछ। यदि कसैले रमणीय डिजाइन, उच्च-अन्तको टेक्नोलोजी, र आरामदायी ड्राइभिङ खोज्दै हुनुहुन्छ भने, युनि-टि सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
२०२२ सालको अन्त्यसम्म, चांगन अटोले ५ विभिन्न प्रिमियम सेग्मेन्ट्सका गाडीहरु नेपालमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार २ : ५५ बजे